Lokho kwaba umbono omuhle wokuqala. Angiyikhokhi i-Technorati ngakho-ke bengingalindele mpendulo noma yini ezobuya. Kusukela lapho, bengingumlandeli futhi bengilokhu ngithola kancane ezinye izindlela ezinhle zokusebenzisa i-Technorati ukuthuthukisa ikhwalithi yebhulogi yami futhi ngilinganise ukukhula, igunya, nokuma kwebhulogi yami.
Manje ngiyazi ukuthi kunabasebenzi abanonembeza ngemuva kweTechnorati abakhathalelayo ukuthi abantu bathini ngenkampani yabo; yingakho, uphawu lwabo. Into elula bekungaba ngabasebenzi ukuthi bamane bakushaye indiva ukungena bese 'bevumela ukwesekwa bakuphathe'. Akukona okwenzekile futhi kukhuluma kabanzi ngophawu lweTechnorati. ITechnorati ingaphezu kwe- “Injini Yokucinga”, iyinkampani ezama ukusiza ama-blogger ukuthi abe ngcono.